Yaa ku guuleystey doodii musharixiinta madaxweyne ee Somaliland? - Caasimada Online
Home Somaliland Yaa ku guuleystey doodii musharixiinta madaxweyne ee Somaliland?
Yaa ku guuleystey doodii musharixiinta madaxweyne ee Somaliland?
Hargeysa (Caasimada Online) – Habeenkii xalay waxaa dood fool ka fool ah isugu yimid saddexda Musharax ee u tartamaya xafiiska Madaxweynaha Somaliland.
Dooda ayaa u dhaxaysey:
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Xisbiga Waddani
Faysal Cali Xuseen (Wareebe) Xisbiga UCID
Muuse Biixi Xaaji Cabdi Xisbiga Kulmiye
Dooda waxaa soo qaban qaabiyey urur lagu magacaabo Inspire Group, waxaana laga daawanaayey caalamka oo dhan.
Dooda ayaa u qaybsaneyd laba qaybood, waxaana ay u badneyd su’aalo la xiriira
Habka dhaqan dhaqaale ee Somaliland,
Siyaasadda arrimaha dibadda iyo maalgashiga
iyo wada hadalkii DOwladda federaalka iyo Somaliland.
Ma jirin farqi weyn oo u dhexeeya musharixiinta marka ay soo gudbinayaan waxqabadkooda iyo waxay Somaliland ka beddalayaan haddii xafiiska loo doorto.
Musharaxa Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa doodiisu u badneyd in uu difaaco dhaxalkii iyo waxqabadkii Madaxweyne Siilaanyo, waxaana uu u muuqdey Muuse Biixi Madaxweyne xilka haya oo mar labaad xafiiska u tartamaya.
Muuse Biixi Cabdi ayaa ku doodayey in uu ka waayo arag yahay labada musharax oo kale, waxaana uu markasta doodiisa ku soo xirayey barnaamijkayagu waa socdaa ee maaha waxbaan hindiseynaa. Sidoo kale waxa uu isu muujinaayey in uu yahay musharaxa keliya ee ku ad adag qaddiyadda Somaliland, meelna ku xiri kara Dowaldda federaalka.
Musharaxa Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ayaa habeenkii xalay u ahady goob uu kaga cadgoosto Cabdiraxmaan Cirro oo horey ay u wada dhisteen Xisbiga UCID isku dalna muddo dheer ku nolaayeen, waxana doodiisu u badneyd in uu weerar ku qaado labada Musharax inkasta oo si qaawan u weeraray Musharaxa Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Cirro.
Faysal Cali Waraabe ayaa dad badan aaminsan yihiin in doodiisu aysan ka tarjumeyn waaqaca yaala Somaliland, sida marka uu lee yahay waxaan sameyn Universal Health Care oo aad loogu yaqaano doorashooyinka Maraykanka.
Musharaxa Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa ku dooday in labada musharax ee kaleba uu siyaasadda ka badiyo, dalkana nidaam xasilooni ah ku hoggaamin doono.
Cabdiraxmaan Cirro oo hadalka uu oranaya si weyn uga fiirsanaya ayaa doodiisu u badneyd in uu waxba ka kama jiraan ka soo qaado waxqabadkii Kulmiye, waxaana uu soo bandhigey nidaam Somaliland horumar ku gari karto.
Cirro oo marar badan labada musharax ee kaleba ay weerar ku qaadeen ayaa si deggan uga jawaabey, halka eedaymaha qaarkood aanu waxba ka soo qaadin.
DHALIILAHA DOODU LAHAYD
Dooda loo qabtey Musharixiinta Madaxweynaha Somaliland ayaa lahayd dhaliilo dhawr ah, kuwaas oo isugu jira kuwo farsamo iyo kuwo shaki la gelin karo ninka hagaayey dooda qaybteeda labaad.
Daadihiyaha dooda ayaa ula dhaqmey Musharixiinta sida ay yihiin Robot ama Mashiin, ma jirin wax dhexgal ah, qofka si shakhsi ahaan ah loo weeraro awood uu isku difaaco ama uu ku jawaabo ma lahayn.
Daadihiyaha barnaamijka ayaa ladhihi karaa waxa uu qaatey wakhti badan, kadib markii su’aal kasta uu ku soo celiyo saddex jeer oo isku mid ah, taas oo laga maarmi karey.
Ma jirin su’aalo shakhsi ah oo si gaar ah loo weydiiyo Musharixiinta iyada oo la raacayo sooyaalkiisi siyaasadeed, su’aaluhu waxay ahaayeen kuwo lawada weydiinayo Musharixiinta
Waxaa shaki la gelin karaa in Muuse Biixi Cabdi iyo Faysal Cali Waraabe isku ogaayeen in ay si wada jir ah oo isu jiibin ku jirto ay u weeraraan Cabdiraxmaan Cirro.
Waxaa shaki la gelin karaa sababta daadihiyaha dooda qaybta labaad uu su’aalaha kala duwanaanshaha ee halka daqiiqo ah markasta ugu hormarinaayey Cabdiraxmaan Cirro, halka uu ku soo xiro Faysal Cali Waraabe oo si shakhsi ah u weeraraayey Cabdiraxmaan Cirro.
Ma jirin fursad Musharixiinta la siiyey oo ay su’aalo dhexdooda isku weydiin karaan.
AMAANTA DOODU LAHAYD
Dooda loo qabtey Musharixiita Madaxweynaha Somaliland ayaa lagu amaani karaa sida sharafta leh ee Musharixiintu uga qayb qaateen, sida ay wakhtiga u dhawrayeen, sidoo kale ka soo qaybgalayaasha ayaa si weyn u ilaaliyey shuruucda dooda waxaana ay ku dhacdey jawi deggan, waxaa lagu amaani karaa in ay tahay tallaabo kale oo dhanka Dimoqraadiyadda ay Somaliland u qaadey.
YAA GUUSHU RAACDEY
Ma jirin su’aal guud oo ka soo qaybgalayaashii ama daawadayaashii barnaamijka la weydiiyey, taas oo ku saabsan qofka ay arkaan in uu ku guuleystey doodii loo qabtey musharixiinta.
Muuse Biixi Cabdi waxaa wakhtigu uga dhamaadey sida uu u difaacayey waxqabadkii Siilaanyo, ma jirin aragti cusub oo uu la yimid.
Faysal Cali Waraabe isaga habeenkii xalay waxay u ahayd mid aargoosi, waxaana doodiisu ahayd sidii isaga oo u tartamaya dalka Finland ee uu dhalashadooda haysto, mararka qaar waxa uu ahaa nin soo min guuriyey siyaasiyiinta Socialist ah ee reer Galbeedka, waxa uu si weyn ugu ciil baxay wixii uu qabey, maadaama Somaliland ay yihiin beelo oo ololaha doorashada nidaamka beeluhu hareeyey isaguna u muuqdo in beeshiisi xitaa looga dheereeyey, waxaana uu ku canbaareeyey labada nin ee la tartamaya in aysan Dimoqraadiyad waxba ka ogeyn ee nidaam beeleysan ay u ololeynayaan.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waxa uu la yimid dood ka duwan labada musharax oo kale oo ay ka muuqatey biseyl, deganaansho iyo dulqaad, dooda oo ahayd laba musharax oo weerar ku ah hal musharax ayuu si wanaagsan isaga moosey gantaaladii ay ku foorariyeen. Cabdiraxmaan Cirro waxaa dhibaato ku ahayd in uu dadka deeqsiiyo aragtidiisa waxaana uu dad badan soo xusuusiyey Musharixii Jamhuuriga Maraykanka Dr Ben Carson sida uu hadli jirey.
Ugu danbeyntii doodu waxay ahayd mid si weyn la isugu dhaw yahay, sida aan sheegney Muuse, waxa uu ahaa Silaanyo oo dib u tartamaya mar labaad, Faysal waxa uu ahaa nin u yimid in uu ku ciil baxo dooda oo ahayd fursad dahabi ah oo soo martey, Waxaa la dhihi karaa waxaa guushu raacdey Cabdiraxmaan Cirro.